Dhammapada (ဓမ္မပဒ) Safe APK Download by Thein - dubAPK
Thein Dhammapada (ဓမ္မပဒ)
ဓမ္မပဒ ကို ပါဠိဘာသာပြန်ကို ပိဋကမြန်မာပြန် ဖတ်ဘူးသည်။ အကောင်းဆုံးကျမ်းစာ တစ်ဆူဖြစ်သည်ဟုလည်း ကြားဖူးပါသည်။ အသေးစိပ်ဖတ်ကြည့်ရန် စိတ်ကူးထားသည်။ သို့သော်လည်း အခွင့်မသင့်သဖြင့် ဖတ်ဖြစ်သည်မရှိခဲ့။
တစ်ခါ အင်တာနက်တွင် ရှာဖွေကြည့်ရာမှ ဦးလောကနာထ၏ ဝက်ဆိုက်ကို အမှတ်မထင် ရှာတွေ့သောအခါ ဖတ်ကြည့်ရာ ပါဠိရော မြန်မာပြန်သာမက အင်္ဂလိပ်သုံးဘာသာဖြင့် တွေ့ရှိသဖြင့် အားရဝမ်းသာ ဖတ်မိပါတော့သည်။ ဗုဒ္ဓစာပေကို ကမ္ဘာအဆင့်အထိ စနစ်တကျ ပြုစုဆောင်ရွက်ထားသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် ဝမ်းသားအားရ ဖြစ်မိပါသည်။ ကြိုးပမ်းမှုကို အားလည်းကျမိပါသည်။
မိမိအနေဖြင့် လူတိုင်းလွယ်ကူစွာ ဖတ်နိုင်အောင် ဖုန်းတွင်စီစဉ်ပေးနိုင်ပါက အကျိုးရှိမည်ကို စဉ်းစားမိသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ စီစဉ်ပေးလိုက်ပါသည်။ မိမိအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓစာပေပြန်ပွားရေး ထိန်းသိမ်းရေးတို့တွင် တစ်ထောင့်တနေရာက အားဖြည့်ခွင့်ရသဖြင့်လည်း ဝမ်းသားကျေနပ်မိပါသည်။
ဘတ်ရှုသူအများအနေဖြင့် တရားအသိရရှိပြီး နိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကြောင်း မေတ္တာဖြင့် ဆန္ဒပြုအပ်ပါသည်။
The Pali translation of the Dhammapada was translated into Burmese by the Pitaka. I have heard that it is one of the best Bibles. The idea is to read in detail. However, I did not read it because I did not have the opportunity.
When I didasearch on the internet, I accidentally found U Law Kana Hta's website. I am pleased to see that Buddhist literature has been systematically organized to the world level. I am encouraged by the effort.
I think it would be useful if I could make it easy for everyone to read on my phone. I am also pleased to have the opportunity to contribute to the preservation of Buddhist literature.
It is my sincere wish that many readers will be aware of the Dhamma and attain Nibbana.
Organizer (U Myint Thein)
From version Dhammapada (ဓမ္မပဒ) 1.2:
Dhammapada (ဓမ္မပဒ) - version 1.2